Soomaaliya oo hey’adaha gargaarka ugu baaqday in ay deg-deg u caawiyaan dadka baahan | Somsoon
Home WARAR Soomaaliya oo hey’adaha gargaarka ugu baaqday in ay deg-deg u caawiyaan dadka...
Soomaaliya oo hey’adaha gargaarka ugu baaqday in ay deg-deg u caawiyaan dadka baahan
Wasaaradda Banii’aadanimadda Xukuumadda Soomaaliya ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegay in Dowladda Federalka ah ay aad uga walaacsantahay fataahadda uu webigu ka sameeyay magaaladda Baladweyne ee Gobolka Hiiraa.
Warka Wasaaradda waxaa lagu sheegay in Dad ka badan 12,000 ay guryahooda ka baxaan islamarkaana ay u barakaceen dhulka joogiisu sarreeyo.
Fatahaadda ayaa sidoo kale waxay saameysay deegaano kale oo ka tirsan gobolladda Hiiraan iyo shabeladda dhexe. Wasaaradda Banii’aadanimadda Soomaaliya ayaa sheegtay in webigu uu qarka u saaranyahay in uu ku fataho magaalooyin kale.
“Dadka fatahaaddu saameysay ee guryahoodii ka baxay ee gaaray dhulka joogiisu sarreeyo hadda waxay u baahanyihiin kaalmo banii aadanimo oo deg-deg ah” ayey tiri Duqa magaaladda Baladweyne.
Sidoo kale Wasaaradda Banii’aadanimadda ayaa sheegtay in Gobolka Gedo uu roob ka da’ayo bilo abaar ah kadib islamarkaana daadadku ay saameen dadkii ay abaaruhu waxyeeladda u geytseen.
“Wasaradda Banii’aadanimadda iyo maareeynta musiibooyinka waxay saaxibadeed iyo dhammaan hey’adaha gar-gaarka ugu baaqaysaa in ay deg-deg uga jawaabaan xaaladda deg-degga ah ayna caawiyaan dadka baahan” ayaa lagu sheegay warka Wasaaradda.
Article horeSheekh Shaakir oo magacaabay guddi doorasho
Article socoda Al-Shabaab oo qorsheeyay in ay weeraraan musaanad uu leyahay Qaranka Kenya